Isiraely: Ny Lainga, Ny Marina ary ny Meme (momba ilay Miaramila sy ilay Tovovavy) · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraCarmel L. Vaisman
Voadika ny 04 Febroary 2012 16:08 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Dansk, বাংলা, Français, srpski, Svenska, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Nivezivezy tany amin'ny tranonkala sosialy any andro vitsivitsy lasa izay , ity sary eto ambany ity, izay ahitana miaramila manitsaka zazavavy kely, lazaina fa miaramila Isiraeliana sy zazavavy Palestianiana. Wesley Muhammad izay namoaka azy ity dia nilaza ho nahita azy ity avy tany an-kafa, ary manontany tena tamin'ny nahatonga azy ho nalaza avy tamin'ny takelakany. Tao anatin'ny roa andro (efa tsy hita intsony ankehitriny) dia nahazo fanehoan-kevitra mihoatra ny 500, ka nilaza ny sasany fa hosoka io sary io.
Navoakan'i Yossi Gavni indray ny sary ka navoitrany fa tsy manana karazana fiadiana tahaka izao ny Tafika Isiraeliana ary tahaka izany koa ny fanamiana. Hevitreverina fa efa nivoaka tamin'ny teny frantsay tamin'ny herintaona ny sary, ka nilaza fa avy tamina fihetsiketsehana tany Syria izay niangaviana haely izy io. Saingy ilay mpamaham-bolongana Arabo Omar Dakhane no nahita ny fiavian'ny sary voalohany (eto ambany), izay sady tsy avy any Syria no tsy avy any Isiraely fa avy tamin'ny tantara tsangana an-dalambe notontosaina tany Bahrain.
Mety ho tapitra teo ny tantara ka namela lesona tsy hivoana izay rehetra mandehandeha eto amin'ny aterineto amin'izao fotoanan'ny fanamboamboarana vaovao sy manao izay hampalaza zavatra izao, saingy nanapa-kevitra ny Isiraely sasantsasany hihevitra fa ny setriny tsara indrindra amin'ny hafatra malaza nefa diso dia “meme” iray mampihomehy [lasa toy ny teny verin-droa]. Tao anatin'ny 24 ora farany dia nosolosoloina zavatra maro hafa dia naely tamin'ny Facebook ilay miaramila, i 10Gag no nanomboka izany, nandeha tao amin'ny 9Gag ny setriny mampihomehy Isiraeliana sy mpiteraka meme [mihomehy] hafa maro.
Ohatra, ny sary tokony hisy ilay miaramila dia nosoloina alika manao fanamiana miaramila Isiraeliana, angamba ho famaliana amim-bazivazy ny honohono aparitaka fa manazatra alika ny Tafika Isiraeliana [IDF] hamely Palestiniana. Nasiana zavatra hafa ihany koa manitsaka ilay zazavavy ka anisan'izany ny empire soldier [miaramilan'ny Ampira] tamin'ny Star Wars [Adin'ny Kintana], Ny Angry Birds [vorona tezitra], ny Android, ilay Avatar N'aavi, Chuck Norris ary ny hafa ihany koa.
Tamin'ny famadihana ny sary ho meme, no ilazan'ny Isiraeliana amin'ny “fiteny tambajotra sosialy” fa tsy misy dikany sady foroporonina fotsiny ny tahaka izao, na dia namehy aza i Wesley Muhammad izay nanomboka ity “Lasa Malaza” hoe: “Nesoriko ny sary (na dia MITRANGA anatin'ny fifanandrinana eo amin'ny Isiraeliana sy Palestiniana aza ny zavatra tahaka izao)”.